Nri dị nro - Kedu nri ndị ị ga-eri na nke na-abụghị? | Nutri Nri
Nri dị nro
Ọ bụrụ na ị nụtụụrụ banyere nri bland, Ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na ọ bụghị atụmatụ ibu arọ ga-efunahụ gị usoro kilo dị ka ọ na-eme na ụdị nri ndị ọzọ dị ka nri Atkins ma ọ bụ Ocheeze. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ya ma chọọ ịmatakwu banyere nri dị nro, mgbe ahụ, m ga-akọwa ihe niile Ihe ikwesiri ima banyere ya, ihe o mejupụtara na ndị bụ ndị mmadụ na ha kwesịrị iso ya.
1 Kedu ihe bụ nri nro?
2 Kedu nri ndị ị nwere ike iri na nri dị nro?
3 Nri amachibidoro na nke a ga-ezere na a bland diet
4 Ihe nlere anya na nri di nro
4.2 Nri ehihie
5 Soro nri dị mma na nke kwesịrị ekwesị
6 Ntuziaka kachasị ọhụrụ na nri ala
Kedu ihe bụ nri nro?
Nri dị nro bụ atụmatụ iri oge ụfọdụ ndị dọkịta na-enye iwu tupu ọrịa digestive dị iche iche ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ụdị ịwa ahụ. Dọkịta na-ahọrọ ụdị nri a, nke mere na onye ọrịa ahụ nwere ike iri nri n'ụzọ dị mfe ma na ị nwere ike taa na ilo na-enweghị nsogbu ọ bụla. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-esokarị nri a mgbe ọ gwụchara mmiri mmiri nri na onye ọrịa dị njikere ilo nwayọ na nke ọma. Ihe mejupụtara nke nri, ga-adịgasị iche dabere n'ọnọdụ ahụike nke onye ọrịa.
Kedu nri ndị ị nwere ike iri na nri dị nro?
Enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nri ruru eru dị ka adụ nakwa na ha dị mma iji tinye ụdị nri a, nke onye na-eso ya ụgwọ ita ata, loro ma obu choro nchapu na gbacha agbacha. Fọdụ nri nwere ike iso nke nri rọrọ arọ bụ:
Ọka dị ka ọ bụ ma ọ bụ ọka wit semolina.
Pasta esi nri ruo mgbe a ga-enweta ụdị dị mfe na nke dị mfe iri.
Mkpụrụ juu na nro dị ka chara acha, banana, ma ọ bụ anyụ.
Esi nri ma ọ bụ sie mkpụrụ osisi dị ka pears ma ọ bụ apụl.
Esie ya inine enweghị akpụkpọ ma enwere ike ịkpụ ha n'ụzọ dị mfe dị ka karọt ma ọ bụ kọlịflawa.
Mmiri ara ehi na ngwaahịa dị ka yogọt ma ọ bụ ude mmiri gbasaa.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ ole na ole nke nri ị nwere ike na-a withoutụ na-enweghị nsogbu onye na-eso nri dị nro.
Nri amachibidoro na nke a ga-ezere na a bland diet
Enwere nri dị iche iche ihe ị kwesịrị izere mgbe ị na-eso ụdị nri a ka ha adịghị mma maka ezigbo mgbaze ma ọ bụ ha siri ike igwu ma ọ bụ ita. Fọdụ nri a machibidoro iwu bụ:
Achịcha nwere mkpụrụ na ọka niile.
Mkpụrụ osisi nwere akpụkpọ siri ike dịka chickpeas ma ọ bụ agwa.
Mkpụrụ osisi kpọrọ nkụ.
Apụl, piich, ma ọ bụ painiapulu.
Uhie, ọkụkọ ma ọ bụ toki.
Sausaji ma ọ bụ hamburgers.
Ihe nlere anya na nri di nro
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na nri bland nwere ike ị nweta gị na-agwụ ike ma sie ike, ma n'okpuru m ga-egosi gị ụfọdụ ihe atụ nke ụfọdụ menu nke ị nwere ike iri nri dị iche iche n'oge ụdị nri a na rie ntakịrị n’ihe nile.
Àkwá a gbara agba na grated cheese, gbazee chiiz na obere egusi.
Sie akwa na creamy bred.
Smoothie ejiri mmiri ara ehi, banana, koko, yogọt, na obere ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụ shuga emee.
Tuna salad na Mayonezi na ngwa nri. Apple puree.
Akwa akwa na Mayonezi na ngwa nri. Melon Salad.
Agwa puree. Ube ke ụtọ.
Turkey na-apụta ube oyibo.
Pasta Salad na Tuna.
Salmọn na-atọ ụtọ na nduku.
Akwụkwọ nri quiche na kọlịflawa puree.
Soro nri dị mma na nke kwesịrị ekwesị
Ọ dị ezigbo mkpa na ịmara na inwe nri dị nro adịghị emegide iri nri ụdị ahụike na ezi nke ahu gi nara ihe nile ndị dị mkpa nri maka ezigbo ọrụ nke otu. Enweghị ike ida otu nri dị ka ihe dị mkpa dị ka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ngwaahịa mmiri ara ehi ma ọ bụ ọka. Mgbe ahụ m ga-enye gị a usoro nke aka ya mere na ahụ gị na-enweta nri dị mma:
Zere iri nri dị ukwuu mgbe niile bara ọgaranya na shuga, karịsịa ndị na-enweghị uru nri.
Tinye nri n’ime nri gị nke agba (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo ma ọ bụ oroma) iji hụ na oriri zuru oke nke vitamin n’ahụ́ gị.
I ghaghi iri nri ihe dị ka calorie 1.200 kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n ’ụbọchị gị ka i riri calorie pere mpe karịa ndị egosiri n’elu, ihe kacha dị mma bụ ahụ gị malite ida akwara n'ụzọ na-aga n'ihu.
Kpachara anya mgbe ị bịara oriri abụba. Eziokwu ahụ bụ na ị na-esoro nri dị nro apụtaghị na inwere onwe gị iri ụdị abụba niile. Iji zere oriri na-ezighi ezi nke abụba, ọ kachasị mma iri ngwaahịa mmiri ara ehi kpamkpam skim ma ọ bụ skimmed ma were obere anụ ofe mee ka ndị dị ọcha nwekwuo ekpomeekpo.
Ntuziaka kachasị ọhụrụ na nri ala
Ọ bụrụ n ’maka ebumnuche dị iche iche ị na - eso nri dị nro, ọ dị ezigbo mkpa ka ị ghara idafu nkọwa ụfọdụ ụkpụrụ nduzi ma ọ bụ ndụmọdụ maka nri. Gbalịa taa nke ọma ma rie nwayọ nwayọ, iji mee ka mgbaze dị ka o kwere mee ma ghara inwe Nsogbu afọ dị ka gas na-akpasu iwe. Ozugbo i risịrị nri, gbalịa izu ike maka nkeji ole na ole ma kwado mgbatị dị otú ahụ.
Ihe kachasị mma bụ iji dobe nri dị nro n'oge ihe dịka 3 0 4 ụbọchị wee gaa nwayọ ma ọ bụ obere iwebata ụdị nri dị iche iche iji wee nweta nri dị mma ị ga - eri n'ụdị ọ bụla nri na vitamin dị mkpa maka ahụ gị. Ọ bụrụ na ị chọpụta na mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, ị ka nwere nsogbu mgbe ị na-eri nri ụfọdụ, ị ga-agakwuru dọkịta gị tụkwasịrị obi.
Dị ka ị hụworo ma gụọ n'isiokwu a, ọ ga-ekwe omume ịme nri ahụike, edozi na ọgaranya ọbụna ma ọ bụrụ na ị nọ na nri dị nro. Gbaso usoro ntuziaka na yana obere ihe okike Nwere ike ịmepụta menu na-adọrọ mmasị nke na-enyere gị aka ịgbake ngwa ngwa na nsogbu ahụike gị ma nye ezigbo nri na ahụ gị.
N'okpuru m na-egosi gị vidiyo nke ihe niile ga-eme ka o doo anya na ihe oriri ị nwere ike ịgụnye n'ụdị nri a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri dị nro
Nke a bụ ndụmọdụ kachasị njọ maka nri dị nro nke m gụworo.
Atụmatụ iji belata varicose veins na-acha akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie tomato
Ọkụ na abụba na-ejegharị